Wɔkyerɛw mmarima a wobetumi ayɛ asraafo no din (1-46)
Lewifo nka wɔn a wobetumi ayɛ asraafo no ho (47-51)
Wɔhyehyɛɛ biribiara pɛpɛɛpɛ wɔ asoɛe hɔ (52-54)
1 Bere a Israelfo fii Egypt no akyi afe a ɛto so abien, bosome a ɛto so abien no da a edi kan no,+ Yehowa ne Mose kasae wɔ ahyiae ntamadan no mu+ wɔ Sinai sare so.+ Ɔkae sɛ: 2 “Monkan Israelfo*+ nyinaa mmaako mmaako. Monkan nnipa dodow a ɛwɔ abusuakuw biara mu, ne nnipa dodow a ɛwɔ wɔn agyanom abusuafi biara mu; na monkyerɛw mmarima a ɛwɔ mu no din nhu wɔn dodow. 3 Wo ne Aaron nkyerɛw wɔn a wɔadi mfe 20 rekɔ+ a wobetumi ayɛ asraafo wɔ Israel no nyinaa din. Monkan dodow a ɛwɔ asraafokuw biara mu. 4 “Momfa ɔbarima baako mfi abusuakuw biara mu nka mo ho. Ɛsɛ sɛ wɔn mu biara yɛ n’agyanom abusuafi so panyin.+ 5 Mmarima a wɔbɛka mo ho no din ni: Nea obefi Ruben abusuakuw mu aba ne Sedeo ba Elisur.+ 6 Simeon abusuakuw mu: Surisadai ba Selumiel.+ 7 Yuda abusuakuw mu: Aminadab ba Naason.+ 8 Isakar abusuakuw mu: Suar ba Netanel.+ 9 Sebulon abusuakuw mu: Helon ba Eliab.+ 10 Yosef mma nso de ni, Efraim+ abusuakuw mu: Amihud ba Elisama. Manase abusuakuw mu: Pedasur ba Gamaliel. 11 Benyamin abusuakuw mu: Gideoni ba Abidan.+ 12 Dan abusuakuw mu: Amisadai ba Ahiesa.+ 13 Aser abusuakuw mu: Okran ba Pagiel.+ 14 Gad abusuakuw mu: Deuel ba Eliasaf.+ 15 Naftali abusuakuw mu: Enan ba Ahira.+ 16 Eyinom na woyii wɔn wɔ asafo no mu. Wɔn na wɔyɛ wɔn agyanom mmusuakuw mu mpanyimfo+ a wɔdeda Israel apem apem ano.”+ 17 Enti Mose ne Aaron frɛɛ mmarima a wɔabobɔ wɔn din yi nyinaa. 18 Na bosome a ɛto so abien no da a edi kan no, wɔmaa Israel asafo no nyinaa hyiae sɛ wɔrebɛkyerɛw nnipa dodow a wɔadi mfe 20 rekɔ+ no nyinaa din mmaako mmaako, sɛnea ɛbɛyɛ a wobehu wɔn mu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu, 19 sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no. Enti ɔkyerɛw wɔn din wɔ Sinai sare so.+ 20 Wɔkyerɛw Rubenfo, Israel ba panyin+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa mmaako mmaako, 21 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Ruben abusuakuw mu yɛ 46,500. 22 Wɔkyerɛw Simeon+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa mmaako mmaako, 23 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Simeon abusuakuw mu yɛ 59,300. 24 Wɔkyerɛw Gad+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 25 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Gad abusuakuw mu yɛ 45,650. 26 Wɔkyerɛw Yuda+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 27 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Yuda abusuakuw mu yɛ 74,600. 28 Wɔkyerɛw Isakar+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 29 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Isakar abusuakuw mu yɛ 54,400. 30 Wɔkyerɛw Sebulon+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 31 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Sebulon abusuakuw mu yɛ 57,400. 32 Wɔkyerɛw Yosef asefo a wofi Efraim+ mu no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 33 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Efraim abusuakuw mu yɛ 40,500. 34 Wɔkyerɛw Manase+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 35 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Manase abusuakuw mu yɛ 32,200. 36 Wɔkyerɛw Benyamin+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 37 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Benyamin abusuakuw mu yɛ 35,400. 38 Wɔkyerɛw Dan+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 39 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Dan abusuakuw mu yɛ 62,700. 40 Wɔkyerɛw Aser+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 41 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Aser abusuakuw mu yɛ 41,500. 42 Wɔkyerɛw Naftali+ asefo no din huu dodow a ɛwɔ abusua biara mu ne wɔn agyanom abusuafi biara mu. Mmarima a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo no, wɔkan wɔn nyinaa, 43 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Naftali abusuakuw mu yɛ 53,400. 44 Mose ne Aaron ne Israel abusua mu mpanyimfo 12 a wɔn mu biara besii n’agyanom abusuafi anan no, wɔn na wɔkyerɛw eyinom din. 45 Enti wɔkyerɛw Israelfo a wɔadi mfe 20 rekɔ a wobetumi ayɛ asraafo wɔ Israel no nyinaa din, na wohuu dodow a ɛwɔ wɔn agyanom abusuafi biara mu, 46 na dodow a wɔkyerɛw wɔn din nyinaa yɛ 603,550.+ 47 Nanso Lewifo+ no de, wɔankyerɛw wɔn din anka agyanom abusuafi a aka no ho.+ 48 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 49 “Lewi abusuakuw no de, nkyerɛw wɔn din, na nkan wɔn nka Israelfo a aka no ho.+ 50 Fa ɔsom ntamadan a Adanse Abopon*+ no wom no, ne emu nneɛma nyinaa, ne ɛho nneɛma nyinaa hyɛ Lewifo no nsa.+ Wɔn na wɔbɛsoa ɔsom ntamadan no ne emu nneɛma nyinaa,+ na wɔasom wɔ hɔ.+ Wɔnkyekye wɔn asoɛe wɔ ɔsom ntamadan no ho nhyia.+ 51 Bere biara a mubetutu ɔsom ntamadan no akɔ baabi foforo no, Lewifo no na ɛsɛ sɛ wotutu.+ Na sɛ moresan asi ɔsom ntamadan no a, Lewifo no na ɛsɛ sɛ wosi. Obiara a wɔmmaa no kwan sɛ ɔnyɛ bi* no, sɛ ɔbɛn hɔ a, munkum no.+ 52 “Ɛsɛ sɛ Israelni biara si ne ntamadan wɔ asoɛe a wɔde ama no no; obiara nsi wɔ baabi a wɔakyerɛ sɛ mmusuakuw abiɛsa asafo+ a ɔwom no asraafokuw ntena* no. 53 Na Lewifo no de, wɔnkyekye wɔn asoɛe wɔ ɔsom ntamadan a Adanse Abopon no wom ho nhyia, sɛnea ɛbɛyɛ a abufuw biara remma Israelfo asafo no so.+ Lewifo no na ɛyɛ wɔn asɛde sɛ wɔhwɛ Adanse ntamadan no so.”*+ 54 Na Israelfo no yɛɛ nea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no nyinaa. Wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ.
^ Nt., “Israel mmarima.”
^ Nt., “ɔyɛ ɔhɔho,” kyerɛ sɛ, obi a ɔnyɛ Lewini.
^ Anaa “obiara nsi wɔ baabi a ne frankaa wɔ.”
^ Anaa “wɔhwɛ bɔ Adanse ntamadan no ho ban; wɔyɛ wɔn adwuma wɔ Adanse ntamadan no mu.”